Maxaa ka ogtahay dalka ay saldhig ka dhigan doonaan ciidamada badda ee dowladda Itoobiya? – Hornafrik Media Network
Maxaa ka ogtahay dalka ay saldhig ka dhigan doonaan ciidamada badda ee dowladda Itoobiya?
By Liibaan Nuur	 Last updated Dec 3, 2019
Ciidamada Badda Itoobiya ee cusub ayaa saldhigooda uu noqon doonaa Jabuuti, halka xarunta taliskooda dhexe ay noqon doonto magaalada Bahir Dar, waxaa sidaas werisay warbahainta Capital Ethiopia.
Ayada oo muddoo laga fakarayey in ciidamada badda saldhig looga dhigo dalalka Sudan, Eritrea ama Jabuuti midkood ,ayaa ilo-wareedyo lagu kalsoon yahay waxay Capita Ethiopia u sheegeen in dowladda ay go’aansatay Jabuuti.
Ilo-wareedyada ayaa sheegay in intii lagu guda jiray booqashadii uu Jabuuti ku tagay toddbaadkii saddexaad ee bishii October, uu ra’iisul wasaare Abiy Ahmed arrintan kala hadlay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle.
Ilo-wareedyada ayaa dhinaca kale sheegay in xarunta taliska ciidamada ay noqon doonto magaalada Bahir Dar ee caasimadda gobolka Amhara.
Hanaanka dib loogu aas-aasayo ciidamada badda Itoobiya ayaa waxaa hoggaaminaya General Kindu Gezu, oo la filayo inuu noqdo taliyaha ciidamada.
Senetor Muuse Suudi: Wasiir Beyle ha cadeeyo hadii ay jirto qolo booskeedii dhagax lagu bedalay